WWE amin'ny resaka miaraka amin'ny NJPW ho lasa mpiara-miasa amerikana tokana, drafitra fizarana talenta - Reports - Wwe
WWE amin'ny resaka miaraka amin'ny NJPW ho lasa mpiara-miasa amerikana tokana, drafitra fizarana talenta - Reports
Na eo aza ny fiakaran'ny mpifaninana matanjaka maromaro mandritra ny taona maro, WWE dia manohy ny orinasa mpanao tolona lehibe indrindra manerantany. Ny tontolon'ny tolona kosa dia tsy toy ny taloha intsony tamin'ny 10-20 taona lasa izay.
Ny NJPW dia niasa am-pahavitrihana tamin'ny fanentanana vitsivitsy hatry ny ela, fa ny tontolon'ny tolona matihanina iray manontolo dia mety ho amin'ny fikorontanana goavana hafa.
ahoana no hahalalana raha mihoatra ny sakaizany ny olon-tianao
Amin'ny farany Gazety mpanara-maso Wrestling , Dave Melter dia nitatitra fa ny WWE dia efa nifampiresaka tamin'ny New Japan Pro Wrestling momba ny fahatongavana ho mpiara-miombon'antoka Amerikana tokana an'ny orinasa Japoney.
'Amin'izay mety hiafara amin'ny maha-tantara mitolona lehibe indrindra amin'ny taona, na tsy tantara, miankina amin'ny valiny farany, Nick Khan dia niresaka tamin'ny New Japan Pro Wrestling momba ny WWE ho mpiara-miasa amerikana tokana miaraka amin'ny fampiroboroboana, 'hoy Meltzer.
Kintana NJPW maromaro toa an'i KENTA, Yuji Nagata, Rocky Romero, ary Ren Narita no nipoitra tato amin'ny seho AEW. Marihina fa ny Jon Moxley an'ny AEW dia mbola Tompondakan'i Etazonia IWGP manjaka ankehitriny.
Ny NJPW koa dia namela ny talenta hiasa amin'ny IMPACT Wrestling, ary ny orinasa dia manana fifandraisana amin'i CMLL sy ROH ihany koa.
Tsy mbola nisy ny fanavaozana ny haben'ny resaka nifanaovan'ny WWE sy ny NJPW, nanomboka ny volana martsa sy aprily.
'Amin'izao fotoana izao, New Japan dia niara-niasa tamin'ny AEW (KENTA, Yuji Nagata, Rocky Romero, ary Ren Narita miampy Jon Moxley miasa New Japan Strong) ary ny Impact (Juice Robinson, David Finlay, El Phantasmo, ary Satoshi Kojima) ary efa fifandraisana amin'i CMLL sy ROH, saingy niadana ny raharaha tamin'ireo orinasa ireo hatramin'ny COVID. Mazava ho azy fa misy fanontaniana an-tapitrisany momba ny fifanarahana toy izany raha toa ka hitranga izany, ary tsy misy indikasi izay misy ny fifampiresahana taloha hatramin'ny faran'ny volana martsa na ny voalohan'ny volana aprily, hoy i Meltzer nanampy.
Ny antony itiavan'ny WWE hiara-miasa amin'ny NJPW
Meltzer dia nitatitra fa ny fifanarahana mety hisy dia ahafahan'ny kintana WWE hiasa daty vitsivitsy ho an'ny NJPW. Nick Khan dia voamarina fa nanova ny toetran'ny fahavalo WWE satria te ho hita ho mpikambana mavitrika amin'ny vondrom-piarahamonina mitolona amin'ny fivoarana izao ilay orinasa.
Ny tanjon'ny WWE dia ny hanakanana ny NJPW tsy hiara-hiasa amin'ireo orinasa lehibe amin'ny tolona. WWE dia nanandrana nanao sonia ireo mpiady tanora izay nihalehibe nijery ny NJPW, ary ny fifanarahana azo atao dia nanome an'i Vince McMahon tombony hisarihana fisoratana anarana vaovao.
fandraisana andraikitra noho ny zavatra any am-piasana
AEW dia nitazona ny varavarana voarara, ka nahatonga azy io ho toerana mety ho an'ireo mpiady tolona be fanantenana izay te-hijery lalana maro.
'Mazava ho azy fa ny fitazonana an'i New Japan, izay pre-pandemième dia orinasa matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, lavitra ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasa hafa, izay mety hanamafy ny mpanohitra ary koa ho antony iray amam-panahin'ny WWE ho an'ny talenta mitovy amin'ny orinasa hafa satria misy isan-jaton'ny talenta tanora izay nihalehibe tamin'ny fijerena an'i New Japan na tamin'ny alàlan'ny kasety na YouTube izay ny fiasana any dia misy ampahany lehibe kokoa amin'ny tanjon'izy ireo noho ny an'ny taranaka teo aloha, ary ny talenta AEW dia nanaiky ny hamela ny talentany hiasa any ivelany ny rindriny sy ny fiantraikany dia ahafahan'ny talenta hiasa miaraka amin'ny fampiroboroboana hafa, 'hoy i Meltzer namarana.
Ity dia tantara mandroso izay mety hisy vokany maharitra eo amin'ny sehatry ny ady amin'ny tolona. Ahoana ny fandraisan'ny AEW ny vaovao? Inona no hitranga manaraka? Mijanona eo am-pitandremana ireo fanavaozana rehetra.
Ampianaro manatsara ny faritra Sportskeeda WWE. Makà fanadihadiana 30sec izao!
ny fomba tsy hiheverana be loatra ny fifandraisana
ny fomba hialana amin'ny fifandraisana tsy misy fanidiana
inona no holazaina amin'ny namako aorian'ny fisarahana
manaova sonia ny vadinao taloha te-hiverina anao